Umthandazo ku-Saint Ignatius waseLoyola. ? Ukugxotha abantu kunye neentshaba
Umthandazo kuSanta Ignatius waseLoyola Inamandla kakhulu kuba ukusukela wayelapha emhlabeni eyona nto iphambili kuye yayikukuhlala kukholelwa kwaye uncede abanye.
Yiloo nto ke wafezekisa izinto ezinkulu ngaphandle kokuba likholwa elizimiseleyo nelizwi likaThixo kunye nokwenza imfundiso yobuKristu. Yayilukholo olunamandla olo lwalusoloko lunento eyamncedayo kwada kwaba ngumphefumlo wakhe wokugqibela ukwenza ukuthanda kweNkosi.
Ngoku ungumntu otyunjiweyo kwaye ungcwele kwiCawa yamaKatolika ngenxa yemimangaliso awayeyinikezela nasemva kokuba ephumile kulo mhlaba.
Umkhonzi welizwi loThixo odalayo othe namhlanje waba liqabane lethu ukusinceda kwiimeko ezimbi.
Nokuba yeyiphi na imfuno esidlula kuyo, ngokuqinisekileyo uSan Ignacio de Loyola unoncedo ezandleni zakhe ukusinika.
1 Umthandazo ka-Ignatius wase Loyola ngubani?
1.1 Umthandazo kaSanta Ignatius waseLoyola wokwahlukanisa abantu
1.2 Umthandazo kwi-Ignatius yaseLoyola enxamnye neentshaba
1.3 Umthandazo wokhuselo
1.4 Ukuthintela abamelwane ababi
2 Ndingathetha izivakalisi ezi-4?
Umthandazo ka-Ignatius wase Loyola ngubani?
Imbali isixelela ukuba u-Ignacio de Loyola wazalwa ngo-1491. Wenza umsebenzi wezomkhosi njengesiqhelo kusapho lwakhe. Nangona kunjalo, wafumana ukwenzakala okumthintele ekuqhubekeni nezifundo zakhe zasemkhosini kwaye ngale ndlela ke waqala ukuba likholwa elithembekileyo kwinkolo yobuKristu.
Qalile ukwenza ukuziphindezela ngokomoya Kwaye wagqiba kwelokuba ongeze ezinye iimithambo kuqeqesho kwaye kulapho waqala ukugxekwa ngabanye abalandela imodeli enye yoqeqesho. Emva kweenkqubo ezininzi ekufuneka engene kuzo, waqala nge Inkampani Inkampani yinto ephilayo leyo namhlanje isebenza kuyo yonke into el mundo.
Ufele ngaphakathi eRoma ngonyaka ka-1556 wabethwa ngonyaka we-1609 emva koko wanyulwa ngo-1922. Wanikezelwa ngoJulayi 31 ukubhiyozela ukuzalwa kwakhe kwaye ukhunjulwa kwihlabathi liphela.
Umthandazo kaSanta Ignatius waseLoyola wokwahlukanisa abantu
Owu! Oyintombi eNgcwele eNgcwele, ophakanyisiweyo kunye nomama wasezulwini, ophefumlele ngokukhanya koomama oNgcwele uIgnatius waseLoyola, ukulandela indlela yenkonzo yobubingeleli, ukunikezela ubomi bakhe ngokomoya ukuba akhonze, njengomsebenzi kunye nomzekelo, eluntwini Ndiyakucela, ngokuthobekileyo, uxolele iziphoso zam kwaye undivumele, ngokuzinikela okukhulu endikubizayo kuwe, ukuba uIgnatius oNgcwele waseLoyola andikhusele, amandla Ngokholo, ndisusa abantu kwindalo endiyithandayo abafuna ukundizisela ububi, ndiyakucela ukuba ubakhusele ecaleni kwam kwaye ubazise ukuba kubhetele benze okulungileyo. Amen.
Ukuba ufuna ukuhambisa abantu kude, lo ngumthandazo ochanekileyo weSanta Ignatius waseLoyola.
Emva kokuba ephumelele uSan Ignacio de Loyola ngokutshutshiswa kaninzi ngenxa yokholo, waba ngumsindisi.
Unamandla, ulwa kwaye, ukuza kuthi ga ngoku, umzekelo wobungcwele ngaphandle kweemeko ezininzi. Unokusinceda sime siqinile kwiimeko ezinzima.
Nokuba kungagxothwa abantu abacaphukisayo, amandla amabi, iimeko ezimbi okanye nantoni na eyaba uxolo lwethu.
Kuya kufuneka ukholelwe ukuba unamandla okusivakalisa phambi kotata osezulwini kwaye ke loo meko okanye umntu ushiya ubomi bethu ngokupheleleyo.
Umthandazo kwi-Ignatius yaseLoyola enxamnye neentshaba
Oyena Bawo Ongcwele uSanta Ignatius waseLoyola, umseki woMbutho kaYesu; ukhethwe phakathi kwamawaka ukusasaza ubuqaqawuli bukaThixo kwiimbombo zone zehlabathi; oyena mntu ubalaseleyo kuzo zonke iintlobo zokulunga ...
Kodwa ngakumbi ngobunyulu benjongo obusoloko ulangazelela uzuko olukhulu lukaThixo; iqhawe elibalulekileyo lokuzisola, ukuthobeka kunye nobulumko; engadinwayo, engatshintshiyo, ezinikele kakhulu, ethandekayo; lolona thando lubalaseleyo kuThixo, ukholo olunamandla kunye nethemba elinamandla ...
Ndiyakuvuyela, Bawo wam othandekayo, ukukubona utyebile ngezinto ezininzi kwaye ubaluleke kangaka, kwaye ndiyakucela ukuba ufikelele kubo bonke abantwana bakho lo moya ukhuthazayo, kwaye kum unenjongo ethe tye, yokuba nakwezona zinto zincinci ndizifuna enyulu uzuko lobuThixo. ndilingisa eyakho, kwaye ngale ndlela ndikwazile ukuba ngomnye wobuqaqawuli bakho.
Thandaza umthandazo ka-Ignatius wase Loyola ngokuchasene neentshaba ngokholo oluninzi.
Iintshaba zabakho ukususela ekuqaleni kwendalo kwaye uSan Ignacio de Loyola wayenazo kwaye weza ophumelele kuzo zonke iimeko awatyhubela kuzo, akukho lula kuzo.
Yiyo lo nto ndimbuza ngakumbi kwisivakalisi nxamnye neentshaba U-Ignatius wase Loyola onokusinceda sisombulule iimeko ezininzi kunokuba nzima ukuba umntu azoyise ngobuntu.
Imithandazo yenziwe ngokholo inamandla kwaye xa iinjongo zilungile kwaye umthandazo uphuphuma njengokukhala okuphuma komphefumlo osweleyo akukho nto inokuziswa kuthi.
Ozukileyo we-Ignatius waseLoyola, umsunguli woMbutho kaYesu kunye negqwetha elikhethekileyo kunye nomkhuseli wam!
Kuba uphakeme kakhulu eZulwini ngenxa yokuba uyenzile imisebenzi yakho kwimbeko nozuko olukhulu lukaThixo, ulwa neentshaba zeCawa, ukhusela ukholo lwethu olungcwele, ulwandisa ngabantwana bakho kwihlabathi liphela ...
Ndifumane ngokobuThixo, ngenxa yeempawu ezingasifanelanga zikaYesu Krestu, kunye nokuthandazelwa nguMama wakhe ozukisiweyo, ukuxolelwa kwezono zam, uncedo olusebenzayo lokuthanda uThixo nokumkhonza ngayo yonke imigudu ukususela ngoku kuye phambili, ukungagungqi nokungagungqi kwindlela elungileyo, kunye novuyo lokufa kubuhlobo bakhe kunye nobabalo, ukumbona, ukumthanda, ukumonwabela nokumzukisa kwinkampani yakho yonke inkulungwane.
Ngaba uyawuthanda umthandazo wokhuseleko weSan Ignacio de Loyola?
Wayeyazi indlela yokugcina kunye nokukhusela ukholo kunye neenkolelo zakhe nakumaxesha amabi kakhulu kwaye oku kumenza abe ngumkhuseli wecawe yamaKristu.
Kuye sinokuphakamisa imithandazo yethu kuye cela ukukhuselwa ngamaxesha anzima nokuba yeyethu okanye yosapho ngokubanzi.
Zonke ezo meko zibangela ukuba singaphumli kufuneka sishiywe phambi kobukho bakhe ukuze asincede.
Ukuthintela abamelwane ababi
U-Ignatius wase-Loyola, i-saint ethembekileyo yenkolo yamaKatolika, owayemkhusela kwizithethe ezigwenxa, zowexuko nakwinkohliso yenzondelelo, ukuba kwakhiwa ubu-Katolika, ndicela undilahle kum, njengoko wena kunye nabafundi bakho abathembekileyo bakaJesuit owakhuthaza ukophuka kwabo ngenxa yecawe, ndiyakucela, susa abantu kubomi obungendawo kum, gxotha abamelwane ababi, shenxisa iintshaba zam kwindlela yam, u-Ignatius waseLoyola, umntu ozinikeleyo kuYesu Krestu, ngokulunga kwakho Ubabalo ndiyathumela. Amen
Ukuba ufuna ukugxotha abamelwane ababi, kuya kufuneka uthandaze umthandazo kwi-Ignatius yaseLoyola.
Abamelwane, amaxesha amaninzi, baba yintsapho yethu kuba kwiimeko ezininzi zezona zikufutshane nathi.
Oku kunokuba yinto elungileyo, kuba ukuba nomntu osondeleyo kuwe akusoloko kulapho, kodwa xa bengabamelwane abangalunganga, yonke into iba nzima. Bangaba bantu baba ziintshaba zethu kwaye abathi ngalo lonke ixesha benze ubomi bethu bungabikho.
Thandaza, ukuba ihlala ilukhuselo lwethu kuphela kwanakwiimeko esingazi ukuba senze ntoni.
San Ignacio de Loyola Ungasinceda na ukuphepha aba bamelwane babi ezizele ukutshintsha ukuzola kobomi bethu kunye nabo bonke abasingqongileyo.
Iimpembelelo ezimbi ezizalisa lonke uluntu ngamandla amabi ekufuneka sihambile phambi kokuba zenze ukonakala ngakumbi kuyo yonke imo yendalo esingqongileyo.
Simele Bacele ukuba bahambe ngaphandle kokudala umonakalo, ngaphandle kokushiya iimpembelelo zabo kwaye basuse onke amandla amabi, umthandazo onamandla oya kusinceda ngamaxesha onke.
Ndingathetha izivakalisi ezi-4?
Unako kwaye kufuneka.
Kufuneka nje ube nokholo entliziyweni yakho. Ukholo luya kwenza ukuba bonke basebenze.
Kufuneka sihlala sikholelwa kumandla eSt Ignatius womthandazo kaLoyola ukukhusela abantu kunye neentshaba.
Ke, unokuqiniseka ukuba uya kuhlala unoncedo oluvela kuThixo.